अमेजन फायर टिभी घन, तपाइँको टेलिभिजनमा सबै शक्ति [विश्लेषण] | ग्याजेट समाचार
अमेजन आफ्नो फायर टिभी दायरामा भारी शर्त गर्न जारी छ, जबकि केही दिन अघि हामीले नयाँ फायर टिभी स्टिक (२०२०) को बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं। भर्खरै जेफ बेजोस कम्पनी द्वारा शुरू गरिएको, आज हामी यहाँ 'उच्च अन्त्य' विकल्पको साथ छौं। एक जसलाई काटेको स्याउको कम्पनीले हावी मार्केटमा एप्पल टिभीको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा स्थित छ, उच्च प्रदर्शन मल्टिमेडिया केन्द्रहरू।
अमेजन फायर टिभी घन स्पेन आइपुग्छ, एक K के एचडीआर मल्टिमेडिया केन्द्र जसले तपाईको टेलिभिजनमा अविश्वास गर्ने कार्यहरू प्रदान गर्दछ। हामीसँग रहनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी अमेजन फायर टिभी घन तपाईंको घरमा आउँछ र बैठक कोठामा प्रभुत्व जमाउँछ।
हामीले माथि छोडेको भिडियोमा तपाईं अनबक्सिंगमा हेराई गर्न सक्षम हुनुहुनेछ यो फायर टिभी घन र यसको सामानहरू। थप रूपमा, तपाईले Actualidad Gadget समुदाय लाई लाइक बटनको साथ जारी राख्न र सदस्यता लिन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ।
अमेजन फायर टिभी घन खरीद गर्नुहोस्> LINK
3 मनोरन्जनको लागि बनाइएको
4 ती सबैलाई हाकिम गर्न एक नियन्त्रक
नयाँ इको दायरा विपरीत, यो फायर एकदम कोण र आक्रामक छ, यसको एक साधारण घन आकारको साथ एक LED छ दुबै एलेक्सा र यसको बाँकी कार्यक्षमताहरूको लागि गतिविधि सूचकको रूपमा शीर्षमा।
हामीसँग शीर्ष चारवटा मुख्य बटनहरू छन् जुन माइक्रोफोनलाई म्यूट गर्न, अलेक्सालाई आह्वान गर्दछ, र भोल्युम बढाउन र कम गर्दछ। हामीले कुनै र color विकल्प फेला पारेनौं, कालो यस अमेजन उत्पादनमा प्रमुख हो यसको तल एक नन-स्लिप आधार छ र यसको केही प्रशंसकको कारणले, यो कुनै सजावटमा आकर्षक छ।
यो पछाडि छ जहाँ हामीसँग पोर्ट छ माइक्रोयूएसबी, un आईआर मार्फत नियन्त्रणको लागि पोर्ट, एउटा पोर्ट HDMI र को पोर्ट खुवाउनु हामीसँग रहेका उपायहरूको बारेमा X 86 x 86 74 x 456 XNUMX मिलीमीटर weight weightXNUMX ग्रामको कुल वजनको लागि।
अमेजन द्वारा एक स्पष्ट न्यूनतम शर्त जो हाम्रो लागि एकदम चाखलाग्दो छ। यो "पियानो ब्ल्याक" मा निर्मित छ, जसलाई तपाईं या त प्रेम गर्नुहुन्छ वा घृणा गर्नुहुन्छ। यो सत्य हो कि यो दृश्यात्मक आकर्षक छ, तर यसमा धुलो जम्मा गर्न वा कोरिनको लागि सुविधाहरू छन्, तथापि, यसको स्थानको कारण हामी विरलै यस बिन्दुमा उनीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न गइरहेका छौं।
हामी यो अमेजन फायर टिभी क्यूब, जो एक प्रोसेसर छ हिम्मत मा ध्यान दिन्छौं हेक्सा-कोर (क्वाड-कोर २.२ GHz अधिकतम र डुअल-कोर १. 2,2. GHz अधिकतम) जसको हामी निर्मातालाई चिन्दैनौं। हो, हामी GPU बाट यो जान्दछौं एआरएम माली G52-MP2 (3EE), M०० मेगाहर्ट्ज।
र्यामको रूपमा, हामीसँग २ जीबी हुनेछ (यसको सानो भाई फायर टिभी स्टिकको भन्दा दोब्बर) र १ GB जीबी कुल भण्डारण (दायरा मा बाँकी उपकरणहरू भन्दा डबल पनि)। हुनसक्छ प्रतिस्पर्धाको अन्य उपकरणहरूमा टेक्निकल सेक्सनमा अवर छ, तर यसको अनुकूलित अपरेटिंग सिस्टमले स्पष्ट रूपमा लाभ उठायो।
उत्तम मूल्यमा अमेजन फायर टिभी घन खरीद गर्नुहोस्।
हामीसँग डुअल ब्यान्ड वाइफाइ र MIMO एन्टेना छ जसले दुबै २.2,4 GHz र G GHz नेटवर्कहरूसँग उपयुक्त बनाउँदछ। ब्लुटुथ, हामीसँग मानक स्थानान्तरण र ब्लुटुथ कम ऊर्जा को लागी संस्करण को लागी रिमोट जस्तै सामान संग कुराकानी गर्न।
यो अमेजन फायर टिभी घनको एक फाइदा भनेको यो छ कि mm० मिमी स्पिकर निर्मित हामी टिभी बन्द हुँदा पनि हामी एलेक्सासँग कुराकानी गर्न सक्दछौं। यसले आउटपुट प्रतिक्रियाहरू पाउनेछ जबसम्म हामीसँग यसको निर्मित माइक्रोफोन म्यूट हुँदैन।
मनोरन्जनको लागि बनाइएको
यो अमेजन फायर टिभी घनमा सबै प्राविधिक सेक्सनहरू छन् जुन हामीले गुमाउन सक्छौं। छवि स्तरमा हामीसँग हुनेछ डल्बी भिजन, एचडीआर १०, एचडीआर १०+ र डल्बी एटमस, जसले हामीलाई एचडीएमआई पोर्ट मार्फत .10.१ घेरा ध्वनीको फाइदा लिन मद्दत पुर्‍याउँछ।
छविको रिजोलुसनको सन्दर्भमा, हामी सीमितता बिना नै हामी प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछौं UDH 4K अधिकतम 60 एफपीएस दरको साथ। यसको मतलब यो होइन कि हामी वास्तवमै अन्य रिजोलुसनमा बाँकी सामग्रीको मजा लिन सक्षम हुन्छौं जुन हामीले पुन: उत्पादन गर्न सक्षम छौं, जस्तो कि एचबीओ अनुप्रयोगको सम्बन्धमा छ।
मुख्य स्ट्रिमिंग अडियोभिजुअल सामग्री प्रदायकहरूको साथ हाम्रो परीक्षणहरूको परिणाम अनुकूल छ। नेटफ्लिक्सले समस्या बिना नै K के एचडीआर रिजोलुसनको स्तरमा पुग्यो र हामीले स्यामसंग टिभी (टिजेन ओएस) जस्ता अन्य प्रणालीहरू भन्दा थोरै तीखो नतिजा प्रस्तुत गरेको देख्यौं।
आफ्नै र निजीकृत अपरेटिंग सिस्टमले उसलाई धेरै मद्दत गर्दछ। यसले बाँकी फायर दायरा भन्दा केही छिटो काम गर्दछ, वास्तवमै भारी अनुप्रयोगहरू जस्तै मोभिसार + ले सबै प्लेटफर्महरूमा बगहरू देखाउँदछ। हाम्रो समग्र अनुभव असाधारण राम्रो भएको छ।
ती सबैलाई हाकिम गर्न एक नियन्त्रक
उपकरणको केन्द्रबिन्दु भनेको आदेश हो, यसलाई सम्पर्क गर्ने हाम्रो तरिका। यस केसमा, यसले अलेक्सा भ्वाइस नियन्त्रणमा दांउछ कि हामी पहिले नै अन्य उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न सक्षम भएका छौं र त्यो दुबै प्रकार्य र बटनमा बढेको छ। यद्यपि हामी फायर टिभी क्यूबलाई एचडीएमआई मार्फत टिभीको रिमोट नियन्त्रणको साथ पनि चलाउन सक्नेछौं।
यो नयाँ कमाण्डले हामीलाई फायर टिभी क्यूब बन्द नगरी टेलिभिजनलाई सिधा बन्द गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ केही टेलिभिजनहरूसँग सीधा द्वन्द्वहरू जस्तै सामसु'sको, किनकि यसले सीधा तिनीहरूको आफ्नै HUB लाई आरम्भ गर्दछ प्रत्येक चोटि हामी यसलाई बन्द र खोल्छौं, वा उदाहरणका लागि «Home» बटनले अपेक्षाहरूमा प्रतिक्रिया दिन सक्दैन किनकि अन्तर्क्रिया समान हुँदैन।
अर्कोतर्फ, यसको समाप्त भए पछि नियन्त्रणले एक bittersweet संवेदनाहरू प्रस्ताव गर्न जारी राख्दछ र बटनहरूको मार्ग तपाईले सयौं यूरो भन्दा बढि उत्पादनबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्न। यसले सीधा विरोधाभास गर्दछ, उदाहरणका लागि, सामसु or वा LG बाट मध्य-दायरा र उच्च-अन्त नियन्त्रणहरू र परिवर्तन गर्न एक अनौंठो सनसनी उत्पन्न गर्दछ।
त्यहाँ विकल्पहरू छन् र त्यहाँ अनुकूलन सम्भावनाहरू छन्, तर मेरो दृष्टिकोणबाट कमान्ड तुलनात्मक रूपमा अयोग्य छ।
तपाईं यो संग गर्न सक्नुहुन्छ अमेजनमा ११ ur यूरोबाट अमेजन फायर टिभी घन (लिंक)शीर्षमा भिडियोमा तपाईं यसको सरल कन्फिगरेसन र यो प्रस्ताव गर्दछ असाधारण प्रदर्शन हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। कुनै श doubt्का बिना, यो फायर टिभी घन एप्पल टिभीको गम्भीर विकल्पको रूपमा रोपिएको छ र स्पेनीको बजारमा पुगेको छ।
फायर टिभी घन
कम्प्याक्ट र न्यूनतम डिजाइन
प्रयोग र सहज अनुप्रयोग बगैचा को आसानी
एक मूल्य जुन सीधा प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा गर्दछ
नियन्त्रणले bittersweet संवेदना छोड्छ
सामानहरू जडान गर्न एक USB पोर्ट उपलब्ध छ
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » अमेजन फायर टिभी घन, तपाइँको टेलिभिजनमा सबै शक्ति [विश्लेषण]
LG 32UL950-W, एक धेरै बहुमुखी 4K मोनिटर [समीक्षा]